नयाँ बर्षको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री ओलीले के भने? सम्बोधनको पूर्णपाठ - खबरमञ्च खबरमञ्च
नयाँ बर्षको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री ओलीले के भने? सम्बोधनको पूर्णपाठ
१ बैशाख, खबरमञ्च, at 9:25 AM
By खबर मञ्च / April 14, 2019 / Comments Off on नयाँ बर्षको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री ओलीले के भने? सम्बोधनको पूर्णपाठ
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ वर्ष २०७६ को अवसरमा देशबासीको नाममा सम्बोधन गर्दै गएको साल बेथिति र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानको वर्ष रहेको बताएका छन् ।
उनले आफू नेतृत्वको सरकारले सुशासनका लागि चालेका कदमले नतिजा दिन थालेको दाबीसमेत गरे ।
– गए रातीबाट हामीले बिक्रम सम्बत् २०७५ लाई विदा गर्यौं । आशा, उत्साह र अपेक्षाका साथ गएको वर्ष शुभारम्भ भएको थियो । मुलुकलाई समृद्ध बनाउन हामी सबैले सिङ्गो वर्षभरी आ–आफ्नो स्थानबाट सक्दो मेहेनत गर्यौं । आजको यो नयाँ विहानीमा म, सबै नेपाली दिदीबहिनी/दाजुभाइहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु ।
गएको वर्ष नयाँ वर्षारम्भ गर्दा हामीले, कर्णालीको राराबाट विद्यालय भर्ना अभियानको आरम्भ गरेका थियौं । त्यतिखेर मेरोमनमा प्रसस्तै प्रश्नहरु उठिरहेका थिए
सुत्केरी व्यथालागेका यस्तै भूभागका आमाहरुलाई बचाउने पर्याप्त मानवीय र भौतिक संसाधनको जोहो कसरी गर्ने?
कर्णाली नदी र त्यससँगै गडगडाउँदै बगिरहेकाअरु नदीहरुबाट बत्ति निकालीगाउँ÷बस्तीको अँध्यारो कसरी भगाउने?
– अर्कोतिर म सोच्दै थिएँ– भर्खरै स्थापित संघीय शासन व्यवस्थाको जग कसरी बलियो बनाउने?‘मुलुक बन्दैन, काम हुँदैन’ भन्ने नकारात्मक भावलाई ‘काम पनि हुन्छ– हाम्रै जीवनकालमा नेपाल समृद्ध बन्छ’ भन्ने विश्वास कसरी जगाउने?
संयुक्त राष्ट्रसंघीय वालकोष (युनिसेफ)ले हालै प्रकाशित प्रतिवेदन– ‘अ वल्र्ड रेडी टु लर्न’मा पूर्वप्राथमिक शिक्षामा नेपालको विद्यार्थी भर्नादर ८६ प्रतिशत रहेको र यो विश्वमै अगाडी भएको उल्लेख गरेको छ ।
– गत चुनावमा नेपाली जनताले स्थायित्व, शान्ति र विकासको पक्षमा मतदानगरे । त्यसैले हामीले,गएको एक वर्ष शान्ति, विकास र समृद्धिको नीतिगत, कानुनी र संरचनागत जग बसाल्न खर्चियौं । अब, त्यही जगमा उभिएर विकास र समृद्धिको यात्रातीब्र गतिका साथअघि बढाउँछौं । हामीले हाम्रा संपूर्ण स्रोत, साधन र प्रयासहरु यसैमा खर्चेका छौं । तर आफ्नो मात्रै स्रोत÷साधनबाट हाम्रा आकांक्षाहरु पूरा गर्न संभव नहुने भएकोले नै मित्रहरुसँगको सहकार्य खोजी गरेका हौं । त्यसै खोजीको शुरुवात लगानी सम्मेलनबाट गर्यौं, जसले बाह्य पूँजी र प्रबिधि आमन्त्रण गर्नमद्दत पुर्याएको छ । यसपछिको अभियान, सक्षम जनशक्ति र किटान गरिएको लक्ष्य सहितको कामबाट अघि बढाइनेछ ।
कति किलोमिटर बाटो कालोपत्रे भयो?कतिवटा पक्की पुल निर्माण गरियो?
पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको डीपीआर त तयार भएछ, लिग बिछ्याउने काम चाँहि कहिलेबाट शुरु हुन्छ?
पानीजहाज कार्यालय खुलेछ, सतह–जल यातायात कहिले र कहाँबाट चल्छ?
पहिले नचलेका कतिवटा विमानस्थलअहिले सञ्चलनमा आए?नेपाल भ्रमण वर्ष मनाईंदैछ, नेपालसँग अहिले आफ्नै हवाइजहाज कतिवटा छन् ?
नयाँ युगको शुरुवातको रुपमा थालिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले नागरिकको जीवनमा कस्तो प्रभाव पा¥यो? आजैबाट शुरु हुने जेष्ठ–नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले हाम्रा आमा–बाबाहरुलाई के लाभ दिन्छ?
‘खोलौं बैंक खाता’ कार्यक्रम के हो ? यसले कसरी फाइदा पुर्याउँछ?
काम र रोजगारीको अभियान कहाँ पुग्यो? प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले जनतालाई कसरी लाभ दिने भयो?
‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’बाट देशलाई र स्वयं शेयर किन्ने व्यक्तिलाई के कति लाभ हुन्छ?
– अबको नेपाली समाजको मूल प्रवृत्ति शान्ति, एकता र विकास हो।विकासको लागि सरकार के गर्दैछ त? म ठान्दछु, आज नखोजिए, भोलि, भोलि नखोजिए पर्सी– यी प्रश्नहरु आफैं उत्तर बनेर जनताको जीवनमा आउँनेछन् । हाम्रा कामहरुले आफ्नो जीवनमा ल्याएको परिवर्तन जनताले स्वतः महसुस गर्नेछन् । प्रश्न सोध्नेका लागि सरकार, तथ्य÷तथ्याङ्क सहित जवाफ दिन तयार छ ।
– सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि मैले, सडक–सञ्जालको हिसाबले लामो दूरीमा रहेको कर्णाली प्रदेशको राराबाट जनतासँगको सम्वाद यात्रा थालेको थिएँ । छोटो नै सही डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला र सुर्खेतमा आफूलाई अड्याएर तपार्इंहरुका भावना सुन्ने र मेरा योजना सुनाउने काम गरेँ। ६ वटा प्रदेशसभाहरुलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरुसँग सम्वाद गरेँ । आज म यी सम्वादहरुको सकारात्मक परिणाम देखिरहेको छु ।
Last Modified: April 14, 2019 @ 7:15 pm
प्रधानमन्त्रीले नयाँ वर्षको अवसरमा देशबासीको नाममा सम्बोधन गर्ने